पर्यटन व्यवसायी प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार
काठमाडौँ - आगमी मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका निम्ति पर्यटन व्यवसायी दल बहादुर (डिबी) लिम्बु उम्मेदवारी बन्नुभएको छ ।
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ ललितपुर जिल्ला क्षेत्र नं. ३ बाट उम्मेदवार बन्नुभएको लिम्बुसहित अन्य उम्मेदवारको नाम केही दिन अघि ललितपुरमा चुनावी प्रचारप्रसार कार्यक्रमबीच पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक गर्नुभएको हो । विगत तीन दशकदेखि पर्यटनमा आवद्ध लिम्बुले मुलुकमा सधैं राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक विकास हुन नसकेको भन्दै समग्र पर्यटनको विकासद्धारा मुलुकको आर्थिक विकास गराउन सकिने बताउनुभयो ।
पर्यटनको माध्यमद्धारा मुलुकको विकास र शुद्ध आर्थिक एजेण्डा लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएकाले जनताले अत्याधिक मतले बिजयी गराई एक पटक काम गर्ने अवसर दिने कुरामा आफू ढुक्क रहेको उहाँले बताउनुभयो । दल बहादुर लिम्बुको जीवन–यात्रा भनिन्छ समय नै जीवन हो । समयले मानिसलाई जता लान्छ जीवन उतै जान्छ ।
दल बहादुर लिम्बुको जीवन पनि यस्तै भयो । ब्रिटीस आर्मीमा जागिर खाने उहाँको सोच थिएन तर १४ वर्षको उमेरमा जागिरे हुनुभयो । त्यस्तै, पर्यटन व्यवसाय अंगाल्ने उहाँको उदेश्य थिएन तर अहिले सफल पर्यटन व्यवसायीको रुपमा स्थापित हुनुभएको छ । त्यस्तै, राजनीतिमा लाग्ने पनि उहाँको उदेश्य कदापी होइन तर राजनीतिको अग्निपरीक्षामा उहाँ होमिदै हुनुहुन्छ । नजिकिँदै गरेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उहाँ नयाँ शक्ति पार्र्टी, नेपालको तर्फबाट ललितपुर जिल्ला क्षेत्र नं. ३ बाट उम्मेदवार बन्नुभएको छ । वि.स. २०१८ श्रावणमा धरानमा बुबा रामलाल लिम्बु र आमा आइतोतीको कोखबाट जन्मनुभएको लिम्बु ६ जना सन्तानमध्ये माइलो सन्तान हुनुहुन्छ ।
उहाँको बाल्यकाल मध्य वर्गीय परिवारमा बित्यो । स्थानिय बिद्यालय निकेतन मा.वि.बाट अक्षर शुभारम्भ गर्नुभएको लिम्बुले त्यहीँबाट २०३५ सालमा प्रवेशीका परीक्षा उत्रिर्ण गर्नुभयो । त्यसपछि तत्काल उहाँ ब्रिटीस आर्मीमा जागिर खान हङकङ जानुभयो र त्यहाँ उहाँले १४ वर्ष बिताउनुभयो । २०४९ सालमा ब्रिटीस आर्मीबाट अवकाश पाउनुभएको लिम्बुले केही समय हङकङको एक ट्राभल्स एजेन्सीमा काम गर्नुभयो । उहाँ हुँदा उहाँलाई नेपालप्रति केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले उकुसमुकुस बनाईरहन्थ्यो । त्यसपछि उहाँ २०५१ सालको अन्त्यतिर नेपाल फर्कनुभयो र २०५५ सालमा फास्ट ईन्टरनेशनल ट्राभल्स सञ्चालन गर्नुभयो ।
निजी व्यवसायसँगै २०६१ सालदेखि निरन्तर समाजसेवामा लाग्नुभएको लिम्बु ०६१ देखि नै ट्राभल्सको सबैभन्दा ठुलो छाता संगठन (नाट्टा) मा आबद्ध हुनुभयो । २००६ मा उहाँ नाट्टामा सचिव हुनुभयो र २००८ मा महासचिव हुनुभएको लिम्बु २०१४ देखि ०१६ सम्म अध्यक्ष हुनुभयो । त्यस्तै, २०६४ मा ग्रान्ड एकेडेमी स्कुल (सातदोबाटो) को प्रबन्ध सञ्चालक हुनुभएको लिम्बु २०७० देखि ०७२ सम्म अध्यक्ष हुनुभयो । संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिको संयोजकसमेत रहनुभएको लिम्बु अहिले ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ५ मानभवन टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
फास्ट ईन्टरनेशनल ट्राभल्स एण्ड टुर्स र फास्ट ट्राभल्स सोलुसन प्रा.लिको सञ्चालक तथा मेगा बैंक र टुरिजम विकास बैंकको प्रमोटर हुनुहुन्छ । समग्र मुलुकको परिवर्तन राजनीतिलेमात्र सम्भव छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको लिम्बु व्यवसायसँगै पारदर्शी राजनीतिमा पनि सक्रिय भएर लाग्ने बताउनुहुन्छ । जनप्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताले आफूलाई अपेक्षितभन्दा बढी मत दिएर बिजयी गराउने आफू ढुक्क भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।